Muxuu yahay walaaca ay muujiyeen Mucaaradka? | KEYDMEDIA ONLINE
Muxuu yahay walaaca ay muujiyeen Mucaaradka?
Midowga Musharaxiinta oo soo saaray war saxaafadeed ay uga hadlayaan xaaladda doorashada iyo caqabadaha jira ayaa sheeay in Farmaaajo uu faragalin xooggan ku hayo arimaha doorashooyinka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Midowga Murashaxiinta oo ku dhawaad 50 cisho si dadban kaga gaabsaday arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan xaaladaha kala duwan ee dalka, ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay ku muujinayaan walaac xooggan oo ku aaddan hufnaanta doorashooyinka.
“Goluhu wuxuu walaac xooggan ka muujinayaa in doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonta waqtigii loo asteeyey ay ka dhacdo dalka, isagoo ku salaynaya ifafaalooyinka muuqda ee khuseeya arrimihii ugu waa weynaa ee ahaa caqabadaha horyaala doorashooyinka dalka”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Musharixiinta.
Mucaaradku waxa ay tabasho xooggan ka muujieen maareyn la’aanta ismari-waaga ka jira habraaca doorashada Xildhibaanada waqooyi iyo qanaaco la’aanta laga soo sheegayo gobolka Gedo.
Guluhu, wuxuu toosh ku ifiyay caqabadaha siyaasadeed iyo amni ee mudada dheer ka aloosan Gobolka Hiiraan iyo in aan weli dhaqaalihii doorashada meel la saarin, waqtigii doorashadana la taagan yahay.
Waxa ay hoosta ka xariiqeen in caqabadahaas iyo kuwo kale oo u baahan in si deg deg ah loo xalliyo ay wali taagan yihiin, sababna u noqon karaan dib u dhac doorasho.
Xukuumadda xil-gaarsiinta iyo Madaxda Dawlad goboleedyada ayay ugu baaqeen in ay si deg deg ah wax uga qabtaan caqabadaha hadda taagan, una diyaar garoobaan kuwa imaan kara, si dalka looga hirgeliyo doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda.
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayay ku eedeeyeen in uu faragalin xooggan ku hayo arimaha doorashooyinka, taas oo halis ku ah hamsami u socodka doorashada, waa sida ay hadalka u dhigeene.
Midowga Musharixiinta, ayaa intooda badan la kala furfuray, waxaana la rumeysan yahay in xubno ka mid ah ay tan iyo billawii bishii May ku daabnaayeen Madaxtooyada.